Love Lesson (mmsub)
by CHANNEL+ October 09, 2020
Love Lesson မွနျမာစာတနျးထိုး
Love Lesson-အခဈြသငျခနျးစာ ….
ကိုရီးယားမငျးသမီး Kim Sun-young ရဲ့ ပထမဆုံး 18+ ဇာတျကားဖွဈပွီးတော့ စှနျ့စှနျ့စားစားသရုပျဆောငျထားရပါသတဲ့…မငျးသားခြော Byun Jun-suk ကလဲ ယှကြားထုကိုကိုယျစားပွုလို့ မမမြား မွညျးပွီးအစားခံရမယျ့ မအူမလညျသူငယျတျောအဖွဈပါဝငျထားပါတယျ။
ဇာတျလမျးကလညျး အနုပညာ နောကျခံလေးနဲ့ဗြ။ Hee-Soo ဆိုတဲ့ ကောငျမလေးဟာ သီခငျြးရေးဆရာမလေးပါ။ ဒါပမေယျ့ သူ့မရဲ့ ပြျောရှငျဖှယျရာမရှိတဲ့ ရညျးစားဟောငျးနဲ့ ပွတျပွီးနောကျပိုငျး အနုပညာ ကို ကောငျးကောငျး မဖနျတီးနိုငျဘဲ ဖွဈနပေါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ အထကျတနျး ကြောငျးသားလေး တဈယောကျနဲ့ ဆုံမိပွီး သူမရဲ့ အနုပညာ ခံစားမှု စိတျတှေ တဖနျ နိုးကွား လာပါတယျ။ စန်ဒရား သငျပေးရငျး စတေနာ တှကေနေ အပွာရောငျ လှမျးတဲ့ ခဈြခွငျးတရားတှရေောစှကျလာပါတော့တယျ။ ဆန်ဒနဲ့ သိက်ခာ ကို ထိနျးညှိနရေတဲ့ ဆရာမလေးဟာ မွီးကောငျပေါကျ အရှယျ ကြောငျးသားလေးရဲ့ စိတျရိုငျးကိုလညျး အပွဈမတငျရကျ လိုကျလညျး မလိုကျလြောရကျနဲ့ ဝိရောဓိ ခံစားမှုတှေ ဖွဈပျေါလာပါတယျ။
ခဈြခွငျးတရား ရဲ့ အားနညျးခကျြက အဆုံးစှနျ လိုကျလြောပေးခွငျးဆို ဆရာတပညျ့ စညျးကို ရိုကျခြိုးလိုကျသူ ကတော့ ဆရာမလေး ကိုယျတိုငျဖွဈသှားပါတယျ။ ခဏတာ လိုကျလြောခွငျးနဲ့ ထာဝရလကျတှဲခွငျးကိုလညျး သူမ ရှေးခယျြရပါဦးမယျ။ သူမရဲ့ ခဈြသူဟောငျးကလညျး ပွနျလညျခဉျြးကပျလာသလို ကောငျလေးမှာလညျး သူ့ရဲ့ သကျဆိုငျသူက ရှိပွီးသားပါ။ ဒါပမေယျ့ ဘဝရဲ့ အခိုကျအတနျ့တဈခုမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ ကွညျနူးဖှယျကာလလေးတှအေတှကျ ဆရာမလေးဟာ ဘယျတော့မှ သူ့ဆုံးဖွတျခကျြတှေ အပျေါ နောငျတရမှာ မဟုတျလိမျ့ပါဘူးဗြာ။
ဒီဇာတျကားလေးဟာ လူကွီးဇာတျကား ဆိုပမေယျလို့ အငျမတနျ သိမျမှနေူ့းညံပွီး အနုပညာ ရနံ့တှနေဲ့ ထုံမှမျးနတော တှရေ့ပါတယျ။ သရုပျဆောငျ မငျးသမီး ကိုယျတိုငျကလညျး ဒီဇာတျကားဟာ ကြှနျမရဲ့ စှနျ့စားမှု တဈရပျဖွဈတယျလို့ ပွောခဲ့ဖူးပွီး
ရုပျရှငျကွညျ့ပရိသတျမြားရော ဝဖေနျသူမြားကပါ ခဈြခွငျးတရားရဲ့ အခွားတဈဖကျကို
အကောငျးဆုံး ဖျောကြူးပွနိုငျတဲ့ ဇာတျကားတဈကားဖွဈတယျလို့ သတျမှတျထားကွပါတယျ။
Love Lesson မြန်မာစာတန်းထိုး
အရင်တင်ထားတုန်းကနဲ့မတူတဲ့ Director’s Cut Version ဖြစ်ပါတယ်..အရင်ကထက် လေးမိနစ်စာလောက်ပိုလာပါတယ်…။
Love Lesson-အချစ်သင်ခန်းစာ ….
ကိုရီးယားမင်းသမီး Kim Sun-young ရဲ့ ပထမဆုံး 18+ ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးတော့ စွန့်စွန့်စားစားသရုပ်ဆောင်ထားရပါသတဲ့…မင်းသားချော Byun Jun-suk ကလဲ ယွကျားထုကိုကိုယ်စားပြုလို့ မမများ မြည်းပြီးအစားခံရမယ့် မအူမလည်သူငယ်တော်အဖြစ်ပါဝင်ထားပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းကလည်း အနုပညာ နောက်ခံလေးနဲ့ဗျ။ Hee-Soo ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးဟာ သီချင်းရေးဆရာမလေးပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့မရဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာမရှိတဲ့ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ ပြတ်ပြီးနောက်ပိုင်း အနုပညာ ကို ကောင်းကောင်း မဖန်တီးနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အထက်တန်း ကျောင်းသားလေး တစ်ယောက်နဲ့ ဆုံမိပြီး သူမရဲ့ အနုပညာ ခံစားမှု စိတ်တွေ တဖန် နိုးကြား လာပါတယ်။ စန္ဒရား သင်ပေးရင်း စေတနာ တွေကနေ အပြာရောင် လွှမ်းတဲ့ ချစ်ခြင်းတရားတွေရောစွက်လာပါတော့တယ်။ ဆန္ဒနဲ့ သိက္ခာ ကို ထိန်းညှိနေရတဲ့ ဆရာမလေးဟာ မြီးကောင်ပေါက် အရွယ် ကျောင်းသားလေးရဲ့ စိတ်ရိုင်းကိုလည်း အပြစ်မတင်ရက် လိုက်လည်း မလိုက်လျောရက်နဲ့ ဝိရောဓိ ခံစားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
ချစ်ခြင်းတရား ရဲ့ အားနည်းချက်က အဆုံးစွန် လိုက်လျောပေးခြင်းဆို ဆရာတပည့် စည်းကို ရိုက်ချိုးလိုက်သူ ကတော့ ဆရာမလေး ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ခဏတာ လိုက်လျောခြင်းနဲ့ ထာဝရလက်တွဲခြင်းကိုလည်း သူမ ရွေးချယ်ရပါဦးမယ်။ သူမရဲ့ ချစ်သူဟောင်းကလည်း ပြန်လည်ချဉ်းကပ်လာသလို ကောင်လေးမှာလည်း သူ့ရဲ့ သက်ဆိုင်သူက ရှိပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် ဘဝရဲ့ အခိုက်အတန့်တစ်ခုမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ ကြည်နူးဖွယ်ကာလလေးတွေအတွက် ဆရာမလေးဟာ ဘယ်တော့မှ သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ အပေါ် နောင်တရမှာ မဟုတ်လိမ့်ပါဘူးဗျာ။
ဒီဇာတ်ကားလေးဟာ လူကြီးဇာတ်ကား ဆိုပေမယ်လို့ အင်မတန် သိမ်မွေ့နူးညံပြီး အနုပညာ ရနံ့တွေနဲ့ ထုံမွှမ်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီဇာတ်ကားဟာ ကျွန်မရဲ့ စွန့်စားမှု တစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးပြီး
ရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်များရော ဝေဖန်သူများကပါ ချစ်ခြင်းတရားရဲ့ အခြားတစ်ဖက်ကို
အကောင်းဆုံး ဖော်ကျူးပြနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။
Link - https://mkvlinks.xyz/9MCK5